James Swan "Haddii la qabto Doorasho aan wadar ogol ahayn, Beesha Caalamka ma aqoonsan doonto" - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka James Swan “Haddii la qabto Doorasho aan wadar ogol ahayn, Beesha Caalamka...
James Swan “Haddii la qabto Doorasho aan wadar ogol ahayn, Beesha Caalamka ma aqoonsan doonto”
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan, ayaa Arbacada maanta ah wuxuu u socdaalay caasimada ku meelgaarka Koonfur Galbeed ee Baydhabo.
Swan oo ay wehliyaan wafdi heer sarre ayaa wadahadalo la yeeshay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed [Laftagareen], oo codsaday in uu dhameeyo khilaafka ka taagan doorashada markii uu ku fashilmay dhigiisa Qoorqoor.
Wararka ayaa sheegaya in wadaxaajoodyadda diiradda ay ku saareen doorashooyinka 2020-21 iyo is-faham-waaga ka taagan geedi-u-socodka.
Socdaalka Swan ee Baydhabo ayaa ah lugtii koowaad ee booqashooyin uu maalmaha soo aadan ku mari doono xarumaha maamulada kale ee dalka.
Socdaaladaas ayuu ugu gogol-xaarayaa sidii xal waara loogu heli lahaa qodobada ugu culus ee haatan la isku hayo kuwaas oo kala ah; guddiyada lagu muransan-yahay, xulista wakiilada Somaliland iyo ciidanka dowlada geysay Gedo.
Safarka Swan ee Baydhabo ayaa yimid maalin kadib markii Beesha Caalamka ay hogaamiyeyaasha Soomaaliya ugu baaqdey in ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan ayna deg-deg u xaliyaan khilaafka xoogan ee jira.
James Swan ayaa u sheegay Laftagareen in aanu ku degdegin Doorashada, wuxuuna u sheegay in Beesha Caalamka aanay aqoonsan doonin natiijada ka soo baxda haddii la qabto Doorasho aan wadar ogol ahayn.
Saaxiibada Caalamka ayaa sidoo kale waxay si cad u sheegeen in aysan aqbali doonin wax ka bedel lagu sameeyo heshiiska dowlada iyo maamulada kala saxiixdeen 17-kii September iyo doorashooyin iska soo horjeeda.
Dhawaqan wuxuu ka dambeeyay markii Midowga Musharaxiinta ay soo jeediyeen in hal degaan doorasho laga dhigo coddeynta soo aadan – dalabkaas wuxuu ka hor-imaanayaa heshiiska oo xeerinaya laba degaan doorasho.
Caqabadaha hortaagan fulinta qodobkan waxaa kamid ah ciidanka dowladda geysay gobolka Gedo kuwaas oo Jubaland ay shuruud ka dhigtay in dib loogu celiyo Muqdisho si Garbahaarey uga qabsoonto doorasho xalaal ah.
Kismaayo, caasimadda ku meelgaarka ee Jubaland, iyo Garbahaarey, xarunta gobolka Gedo, ayaa ah labada degaan doorasho ee madaxdu isla garatay in lagu soo xulo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee dalka.